साँच्चै फारम भर्नुभयो ? जनगणनाको लागि कर्मचारी मागिएको छ
५. उखुको मूल्य बढाउन किसानको माग
६. ट्र्याक्टर चालकको मृत्युका कारण दुम्किवासमा तनाव, राजमार्ग अवरुद्ध
गृहपृष्ठ रोजगार साँच्चै फारम भर्नुभयो ? जनगणनाको लागि कर्मचारी मागिएको छ
विभागले गत आइतबार ३९ हजार गणक र ८ हजार सुपरिवेक्षकको लागि आवेदन खुला गरेको छ । दुई महिना फारम भर्ने म्याद राखेको विभागले फराम अनलाइनबाट भर्न सक्ने जनाएको छ ।
काठमाडौं–आगामी जेठ २५ देखि असार ८ सम्म जनगणना हुँदै छ । यसको लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गणक र सुपरिवेक्षक परिचालन गर्दैछ । यसको लागि विभागले गणक र सुपरिवेक्षक करारमा नियुक्त गर्ने गर्ने भएको छ ।
विभागले गत आइतबार ३९ हजार गणक र ८ हजार सुपरिवेक्षकको लागि आवेदन खुला गरेको छ । दुई महिना फारम भर्ने म्याद राखेको विभागले फराम अनलाइनबाट भर्न सक्ने जनाएको छ । आउँदो चैत ५ गते देखि भने जिल्ला र प्रदेशमा जनगणना कार्यालय मै गएर फारम बुझाउन पनि सक्नेछन् ।
यो पनि पढ्नुहोस.. नारायाणकाजीको प्रश्न : आफ्नो सम्पत्ति अरुलाई दिने भनेर वकपत्र गरेको फेला पार्यो भने त्यसले मारेर दिने भन्ने अर्थ लाग्छ ?’
योग्यता कति चाहिन्छ ?
-गणक तथा सुपरिवेक्षकको न्युनतम शैक्षिक योग्यता गणकको लागि १०+२ (दश जोड दुई) वा सोसरह उत्तीर्ण गरेको र सुपरिवेक्षकको लागि स्नातक तह वा सो सरह उतिर्ण गरेको।
– उमेरको हकमा दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्म १८ (अठार) वर्ष पुरा भई ४० (चालिस) वर्ष ननाघेको । महिलाको हकमा ४५ (पैंतालिस) वर्ष ननाघेको ।
– नेपाली भाषाको अतिरिक्त स्थानीय भाषा बोल्न, बुझ्न र अरुलाई बुझाउन सक्ने व्यक्ति, राष्ट्रियस्तरको गणना तथा सर्वेक्षण वा विभागबाट सञ्चालित कुनै पनि कार्यमा अनुभव हासिल गरेका व्यक्ति, तथ्याङ्क वा जनसंख्या विषय लिई स्नाकोत्तर तहमा अध्ययन गरेका विद्यार्थि वा सो तह उतिर्ण गरेका व्यक्ति लाई क्रमशः विशेष प्राथमिकता हुनेछ।
यो पनि पढ्नुहोस.. सीप सिक्ने हो ? ६० वटा सीपमूलक तालिमको लागि आवेदन खुलेको छ
सुविधा कति मिल्छ ?
सूचनामा सुविधा उल्लेख त छैन, तर विभागको वेवसाइटमा यसको बारे उल्लेख छ ।
जनगणनामा गणकले १ महिनाको लागि र सुपरिवेक्षकले २ महिनाको लागि करारमा सेवा लिइनेछ। गणकको तलव नेपाल सरकारका खरिदार सरह करिव २६ हजार र सुपरिवेक्षकको हकमा नायव सुव्वा सरह करिव २८ हजार मासिकरुपमा पाउनेछन् ।
सूचना सबै यहाँ छ
फारम यस्तो छ
सीप सिक्ने हो ? ६० वटा सीपमूलक तालिमको लागि आवेदन..
नारायाणकाजीको प्रश्न : आफ्नो सम्पत्ति अरुलाई दिने भनेर वकपत्र गरेको..